Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseFransi ezaphulayo » Ukuziphatha okungamkelekanga: IFransi ikhumbula abathunywa bayo e-US nase-Australia
Iindaba zase-Australia eziQhekezayo • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Urhulumente wase-France utsala oonozakuzaku bakhe e-United States nase-Australia.
IFransi ibiza ukukhutshwa kwayo kumanyano olutsha lwe-AUKUS kunye nelahleko yesivumelwano esikhulu sangaphantsi kolwandle.
Umongameli wase-France urhoxise umsitho we-gala kwiNdlu yoZakuzo yase-France e-Washington, DC ecwangciselwe isikhumbuzo seminyaka engama-240 semfazwe yomkhosi wamandulo.
Umphathiswa Wezangaphandle wase-France uJean-Yves Le Drian ubhengeze namhlanje ukuba iFrance ikhumbule oonozakuzaku bayo abavela e-United States nase-Australia malunga 'nokuziphatha okungamkelekanga' eWashington, London nase Canberra ekuqulunqeni isivumelwano se-submarine esikhokelele ekurhoxisweni kwesiqhelo esikhulu sase-France. inkontileka yolwandle kunye ne-Australia.
Ngokuka-Le Drian, isigqibo sokukhumbula abathunywa sasigwetyelwe ngokupheleleyo 'ngumxhuzulane owahlukileyo' wesibhengezo esenziwa e-Australia ngo-Septemba 15. i-USA nase-UK.
"Ngokwesicelo sikaMongameli weRiphabhlikhi, ndaye ndagqiba kwelokuba ndibuyele eParis kwangoko ndibuzane nabameli bethu eMelika nase-Australia," utshilo uLe Drian.
Umongameli wase-US uJoe Biden, Inkulumbuso yase-Australia u-Scott Morrison kunye no-Britane u-Boris Johnson babhengeza inyathelo le-'AUKUS 'kumnyhadala weendlela ezintathu ngoLwesithathu emva kwemini. Eyona ndawo iphambili kulo mfelandawonye "weedemokhrasi zaselwandle" yiprojekthi yeenyanga ezili-18 yokubonelela iCanberra ngeenqanawa ezinamandla zenyukliya kodwa zixhobile. Oku kuyakwenza ukuba i-Australia ibe lilizwe lesixhenxe kuphela emhlabeni ukuba lisebenzise ezo nqanawa-kwaye kuphela kwayo ngaphandle kwezixhobo zenyukliya.
Urhulumente we Fransi uxelwe ukuba ufumene malunga nesivumelwano kwiingxelo zemithombo yeendaba, kunokuba uvele eWashington okanye eCanberra ngqo, nangona amagosa ase-Australia enyanzelisa ukuba bayenze yacaca gca iqabane labo ukuba isivumelwano seFrance-Australia singa rhoxiswa.
UMphathiswa Wezomkhosi ka-Le Drian uFlorence Parly ukhuphe ingxelo evuthayo ephendula ukutyhilwa kwe-AUKUS, kwaye umphathiswa wezangaphandle kamva wayibiza ngokuba 'kukuhlaba ngasemva.'
Umongameli wase-France u-Emmanuel Macron urhoxise umsitho we-gala kwindlu yozakuzo yase-France e-Washington, ecwangciselwe isikhumbuzo seminyaka engama-240 sedabi lomkhosi owanceda ukuphumelela imfazwe yase-US yenkululeko.
IFransi ayikhange ikhutshelwe ngaphandle kuphela kule mfelandawonye intsha, kodwa yaphulukana nekhontrakthi yokubonelela ngeenqanawa ezazisetyenziswa eAustralia. Urhulumente wase-France unesabelo esikhulu kwi-Naval Group, ebesisebenza kwisivumelwano, esixabisa ukuya kuthi ga kwi-66 yezigidigidi zeedola.